N'ogbe Electric Silicone Waterproof USB Rechargeable Scrub Ihu Nhicha Brush Manufacturer and Supplier | Enimei
Eletriki Silicone Waterproof USB Na-ehichapụ Ihucha Icha ihu
1. Super Hygienic Soft Silicone mpụta roba na-enye ndị dị nro na kasị eke saa nke ihu na ịhịa aka n'ahụ niile nkịtị akpụkpọ ụdị.
2. Nweta nkwenye siri ike na ihu gị site na ọgaranya, nke dị nwayọ, ahụike, ahụike. Jiri nwayọ wepụ ihe na-adịgide adịgide, pores miri emi dị ọcha, belata blackheads nwere ike zuru oke yana mbọ dịkarịa ala ka ị wee nwee ike ịmịcha ọkụ site na ọhụụ ọhụụ ọhụrụ.
3. Thedị nke oval, ụdị ejiji na-eme ka ọ dị mfe ijikwa ma dị mma ibufe. Ihu nhicha na a dị mfe aka ejide unit, ọ dịghị mkpa ịgbanwe isi nke ahịhịa. Ndị ọrụ na-agba ụgwọ ndị ọrụ. Ego zuru ezu bụ awa 3 ma nwee ike iji oge 200.
4. Ngwaahịa a bụ IPX7 na-enweghị mmiri, enwere ike iji ya saa ahụ na ịsa ahụ.
1. Belata wrinkles
2. Akpụkpọ anụ dị nro na ahụike
3. Massaging eme na-eme ka a izuike ọgwụgwụ nke ụbọchị gị.
4. Iwepụsị anụ nwụrụ anwụ ekpughe ọkụ ntorobịa dị n’okpuru.
Ngwa ngwa ngwa na akpụkpọ anụ
Ọ dịghị emebi emebi anụ ahụ, enweghị mmebi ahụ
Na aka ụfụfụ?
Na-enwu gbaa ihu
Emekwala ka ọ dị ọcha.
Nile - gburugburu nhicha, melite gloss
Wepụ mmanụ siri ike
Ihe nhicha, nhicha, nhicha
Orucha nke oma ma otutu otutu
Gbanwee Nsogbu Ihu
Da ahụ na-eme ka ahụ ghara ịma mmiri
Cleanda dị ọcha
Kindsdị usoro macaron dị iche iche 3
Nke gara aga: Waterproof ọma jijiji Electric Silicone ịsa ahịhịa na Long emefu
Osote: Mkpụrụ osisi akwukwo nri ọdịdị ihu nkpuchi igwe DIY Ihu nkpuchi
collagen peptides na anụahụ
peptides collagen maka anụ ahụ
collagen peptides rụrụ arụ
collagen peptides uru anụ ahụ
collagen mbadamba maka akpụkpọ
Comedo mmiri Ngwá Ọrụ N'ihi Skin
Comedo mmiri Ngwá Skin Cleaner
Comedo mmiri Ngwá Ọrụ Skin Pore Cleaner
peptides na collagen maka anụahụ
akpụkpọ collagen micro mbadamba
New nwa seramiiki nkedo onu straightener
Hair mbo Straightener Hair Straightener Electr ...
Waterproof ọma jijiji Electric Silicone ịsa B ...
Eletriki ịchọ mma ntọala etemeete ahịhịa
5 na 1 ọhụrụ ọkachamara ntutu curler Electric ha ...
Ihu blackhead remover agụụ extractor beaut ...
4 Ala, 3 Building, Pengtengda Industrial Park, Nke 131, Huating Road, Dalang, Longhua Mpaghara, Shenzhen, Guangdong, China
Copyright - 2014-2021: All Rights echekwabara.